Myanmar Monk Student Association: ဗေဒင်
ကံတရားနဲ့ ဗေဒင်လက္ခဏာပညာ ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ လို့ သဘောထားပြီး လေ့လာကြရအောင်။
ဒီတော့ ဘုရားရှင်ဟာ ဗေဒင် နက္ခတ် ကို လက်မခံ ၊မယုံကြည်ကြောင်း အတိအကျ ဟောထားတာ တားဆီးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ဆောင်မှုမှာ အများကြီး မူတည်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သေမယ်လို့ တော်တော်တိတိကျကျ ပြောလို့ ရနေတဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ အဆုတ်မှာ ထိခိုက်ပြီး ( အဆုတ်ရောဂါပေါ့) ။
သေနိုင်တယ် လို့ စိတ်မှာ သိနေတယ်။ ဆေးလိပ်ဖျက်ပါ ။ အာဟာရရှိအောင်စားပါ ။ အကြံပေးဖြစ်တယ်။ ပြုပြင်လို့ရကြောင်း ၊ မပြုပြင်ရင် အသက်အန္တရယ်ရှိကြောင်းတော့ ပြောဖြစ်တယ်။ သူတကယ် ကို မသေချင်စိတ်မျိုးနဲ့ လုပ်တယ်။ အခုထိ ကျန်းမာစွာရှိနေပါတယ်။ လက်ဝါး ၊လက်သည်း ၊ လမ်းကြောင်းအရောင် တွေလုံးဝပြောင်းတယ်။ ကျန်းမာသူတစ်ယောက်လက်မျိုးပြန် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေတော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ် ။စိတ်ကနေ ၊လုပ်ရပ်ကနေ ကိုယ့်လက္ခဏာကို ပြောင်းအောင်လုပ်ပြ်ိး ဆရာချင်းပြိုင်တာတွေတောင်ရှိပါတယ်။ စိတ်ပေါ်မှာ နေ့စဉ်ဘ၀လုပ်ကိုင်မှုတွေမှာ မှီခိုနေတာမို့လို့ အမြဲ မမှန်ပါဘူး။
ဒီတော့ ဒီပုဏ္ဏား တွေလဲ သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီးအလိုကျ (၂)ခွပြောခဲ.ပေမယ့် သူတို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားရဲ. လက် လက္ခဏာအရ ဘုရားဖြစ်မယ်လို. ယူဆခဲ.ကြပုံရပါတယ်။ လက် လက္ခဏာမှာ စကြာဝတေးမင်းသော်၎င်း ၊ ဘုရားသော် ၄င်းဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) ခွ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ. ခြေ လက္ခဏာက ” စက်ရာ ” မှာတော့ ကာမဂုဏ်ခံစားမယ့်သူလား ၊ ကာမဂုဏ်စွန့်ပယ် မယ့်သူလား တိတိကျကျဖော်ပြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ကာမဂုဏ်ခံစားမယ့်သူဆို စကြာဝတေးမင်း ၊ ကာမဂုဏ်စွန့်ပယ် မယ့်သူ ဆို ဘုရားဖြစ်မယ်လို. ဆုံးဖြတ်နိုင် ပါတယ် ။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Sunday, 11 March 2012